Kulanka Lixaad ee Golaha Shacabka oo maanta baaqday – Kalfadhi
Kulanka Lixaad ee Golaha Shacabka oo maanta baaqday
April 15, 2019 Kalfadhi
Kulankii 6-aad ee Golaha Shacabka ayaa baaqday maanta, iyada oo aysan cidna ogaan wali sababta baaqashadiisa. Xildhibaannada, oo loo diri jiray fariin ku saabsan inuu jiro kulan uu goluhu leeyahay iyo ajandaha kulankaas, ayaan helin wax aqbaar oo xiriir la leh inuu maanta jiro kulan uu yeelanayo Golaha Shacabka.
Golaha Shacabka ayaa kulma todobaadkii saddex jeer: Sabti, Axad iyo Isniin. Maalmahaaas, oo u ah golaha kulan caadiya, ayey marmar ama in badan dhacdaa ineysan Xildhibaannada Golaha Shacabku kulmin. Mararka qaar waa la ogaadaa sababta baaqashada, laakiin sida kulanka maanta baaqday oo kale ayey marar badan dhacda ineysan shacabka iyo xildhibaannaduba ogaan sababta.
Inuu kulan dhaco ayey Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka u sheegeen Kalfadhi iney ku xiran tahay inuu ka fadhiisto Guddiga Joogtada ah ee Golaha, kadibna uu go’aamiyo kulanka, ajandihiisa iyo maalinkiisa. Xildhibaanno aad u tira badan ayuu Kalfadhi marar badan daabacay, iyagoo ka cabanaya baaqashada kulamada golaha.
Laakiin, shalay waxay Xildhibaannada Golaha Shacabka yeesheen kulan aan caadi ahayn, oo ay su’aalo amniga dalka xiriir la leh ku weydiiyeen Madaxda Laamaha Amniga: Wasiirada Difaaca iyo Amniga, Taliyayaasha Ciidanka iyo Kusimaha Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugidda ee NISA. Kulankaas, oo ay saxaafaaddu dibadda ka joogtay, waxa uu ahaa kii 2-aad oo uu goluhu todobaadkaan uga hadlo amaanka dalka.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo safar shaqo ugu amba-baxay dalka Turkiga
Doorashada 3 Xildhibaan oo Baydhaba ka dhici doonta 27-ka bishaan